Qarxiyaasha CRJ-200 Xidhmo (CoG arrimaha / soo dejinta)
Qarxiyaasha CRJ-200 Xidhmo (CoG arrimaha / soo dejinta) Bilood 2 1 maalin ka hor #1811
Waxaan dhawaan soo dejiyay oo aan duulayay xirmada quruxda badan ee CRJ-200. Si kastaba ha noqotee waxaan ogaaday in diiwaanka isbedelka uu muujinayo inuu jiro isbedel diyaarad.fg kaas oo xaddiday miisaanka diyaaradda. Si kastaba ha noqotee, waxaan ogaanayaa in xarunta dayuuradaha ee culeyska ay wax walba si toos ah sanka ugu xirto iyadoo aan loo eegin culeyska miisaanka, xitaa diyaaradda madhan. Waxaan sidoo kale la ildaran yahay arrimo ku saabsan giraangiraha oo ku kala dhex socda dariiqyada wadnaha, oo keenaya xad-dhaaf xad-dhaaf ah oo suuxdin ah iyo sidoo kale mashiinka sanka oo la gooyo marka la dego.
Waxaan go aansaday in aan qodo faylka diyaaradda.cfg, waana ku qanacsanahay isbadalada .cfg si sax ah looguma darin soo degsashadaan. Waxaan u arkaa wax layaab leh in jagooyinka datum iyo boosaska CG ay yihiin dhamaantood. Waxaan dareemayaa inay tani wax ku kordhineyso culeyska mushaharka iyo shidaalka, iyo sidoo kale isku imaatinka markasta oo madhan yahay ama buuxa.
tixraac_datum_position = 0.000, 0.000, 0.000 madal_cid_CG_position = 0.000, 0.000, 0.000
Cidna wax talo ah, fikrad ah, kala soo bax si aad wax uga qabato arrimaha CoG diyaaradda? Miyayna arrinta CoG noqon doontaa sababaha arrimaha xiisaha leh ee loo maro tagaasida iyo jid-mareenka? Waan ka baxay fikradihi aniga xitaa kuma ihi khabiir wax fikir ahna kama haysto halkaan ku bilaabi lahaa inaan hagaajiyo arrimaha la sheegay.
Qarxiyaasha CRJ-200 Xidhmo (CoG arrimaha / soo dejinta) Bilood 2 1 maalin ka hor #1813
Waxaan u malaynayaa inay kaliya u dhigayso xarunta cufnaanta xarunta diyaaradda, marka diyaaradda ay madhan tahay. Ma ogeyn in la soo booday sababta oo ah hawo qaadashadu waxay u muuqdaan inay leeyihiin saameyn laakiin waxaan u arkaa inay waaaaaay inay sabeynayso. Sida sanka oo kale ilaa 60 garaacis ka dib markii la dego. Waxay ka dhigtaa waxyaabo adag laakiin xiiso badan, laakiin aan macquul ahayn.